Shiinaha Warshad Kaabsal adag oo faaruq ah iyo alaab-qeybiyeyaal | Gelken
Ku adag kaabsal madhan wuxuu ka kooban yahay dabool iyo qolofta kaabsoolka jirka oo ka samaysan gelatin dawo iyo qalab caawimaad leh .Waxa si weyn loogu isticmaalaa qabashada dawooyinka adag iyo kuwa dareeraha ah Faa'iidada ugu weyn ee kaabsalkani waa inay hanan karto noocyo kala duwan oo daroogo ah. Intaas waxaa sii dheer, kaabsalku wuxuu leeyahay bioavailability wanaagsan sababo la xiriira kala-baxa deg-degga ah ee lagu kalsoonaan karo ee nabdoon ee kaabsoolka.
Dhadhanka dawooyinka qaarkood ma fiicna, way fududahay in la neefsado dhuunta wadnaha ee keenta ceejinta, ama afka way fududahay in candhuufta lagu daadiyo; Daawooyinka kale waxay ka xanaajin karaan hunguriga iyo xuubka caloosha oo xitaa waxay sababi karaan gubasho. Kaabsal adag oo madhan ma aha oo kaliya inuu ilaaliyo hunguriga iyo marinka neefta, laakiin sidoo kale wuxuu sameeyaa hantida daroogada in aan la baabi'in.
Cap Kaabsoolada qaar waa kaabsul gal ah, oo u shaqeeya sidii qolof difaac ah si ay daroogada ugu galbiyaan ilaa xiidmaha, taas oo u oggolaaneysa maaddooyinka inay ka baxsadaan burburka aashitada caloosha oo ay gaaraan xiidmaha si nabdoon wax u nuugista.
■ Kuwa kale waa kaabsol-sii-deyn joogto ah, taas oo dheereysa waqtiga sii-deynta maaddooyinka daroogada oo saamaynteeda ka dhigaysa mid deggan.
1, sababta oo ah kaabsoolka godku wuxuu leeyahay astaamo aad uyar oo biyo ah, si sahal ah loo jabin karo, aad u fudud in la jilciyo cilladaha, sidaa darteed waa in la kontaroolaa cabirka biyaha ee warshadda kaabsoolka ah ee u dhexeeya 12.5-17.5%;
2. Koonteenarada leh kaabsulka waa in la dhigaa khaanadaha, kana fog Windows iyo tuubooyin si ay u ahaadaan meel qabow oo hawo leh, kana fogow iftiinka qoraxda una dhow kuleylka;
3, laguma dhejin karo markay doonaan iyo cadaadiska;
4. Weelka wax lagu duubo waa in lagu hayaa meel xiran inta aan la isticmaalin. Haddii la furay, fadlan qaado tallaabooyinka u dhigma jeermiska ka-dhigista, haddii kale way fududahay in la keeno faddaraynta bakteeriyada.
5. Heerkulka alaabada waa in lagu hayaa 15-25 ℃;
Qoyaanka qaraabada ah waxaa lagu hayaa 35-65%;
6, laguma kaydin karo heerkulka sare iyo xaaladaha qoyaanka, ama waxay noqoneysaa mid jilicsan sababtoo ah isku dhejinta kuleylka iyo qallooca, sidoo kale laguma dhejin karo heer kulku waa mid aad u hooseeya ama jawi aad u qalalan, haddii kale kaabsalku waa sahlan yahay in la soo saaro ifafaale jilicsan;
Hore: Feed Fasalka Collagen
Xiga: Warshadaha Warshadaha